RASMI: Kooxda Inter Milan oo ku dhawaaqay inay heshiis cusub ka saxiixatay Milan Skriniar – Gool FM
Haaruun May 16, 2019
(Milano) 16 Maajo 2019. Milan Skriniar ayaa heshiis cusub oo afar sanadood ah qalinka ugu duugay Inter Milan, kaasoo kooxda ku sii hayn doona illaa sanadka 2023-ka.
Skriniar ayaa la la xiriirinayey kooxo dhowr ah oo ka dhisan qaaradda Yurub oo ay horboodayaan kooxaha Manchester City iyo Barcelona, laakiin heshiis ayuu haatan u cusboonaysiiyey kooxdiisa reer Talyaani.
“Wadajir, maxaa yeelay markaan wadajirno waa xooggan nahay” ayaa lagu bilaabay bayaan ka soo baxay kooxda Inter Milan.
“Milan Skriniar iyo Inter Milan waxa ay leeyihiin ujeeddooyin isku mid ah, waana sababta Internazionale ay heshiiska ugu kurdhisay difaacan reer Slovakia qandaraas ku eg illaa 30 bisha June sanadka 2023-ka.”
“Skriniar waxa uu Nerazzurri ku soo biiray xagaagii 2017-kii, waxaana uu xirtay maaliyaddeenna isagoo aan iska siibin tan iyo markaas.”
“Xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey waxa uu ahaa cajiib, waxa uu ciyaaray daqiiqad kasta 38 ciyaarood oo aan dheelnay horyaalka, isagoo dhaliyey afar gool”
“Difaaceenna dhexe ee Skriniar, kaasoo dhashay sanadkii 1995-kii, waxa uu xilli ciyaareedkan saftay 44 kulan.”
Xiddigan reer Slovakia ayaa kooxda Inter kaga soo biiray Sampdoria, waxaana ay labo sano ka hor uga soo qaateen adduun dhan 38 milyan oo gini.
24-sano jirkaan ayaa u ciyaaray 84 kulan kooxda Inter Milan waxaana 40 ka mid ah kulamadaas ay yimaadeen xilli ciyaareedkan.
Ed Woodward oo ugu dambeyntii ka baxay aamusnaanta, fariina u diray taageerayaasha kooxda Man United